लूका २२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२२ निस्तार-चाड पनि भनिने अखमिरा रोटीको चाड नजिक आउँदै थियो। २ साथै, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू उहाँलाई खतम गर्ने राम्रो उपाय खोजिरहेका थिए, किनकि तिनीहरू मानिसहरूसित डराउँथे। ३ तब बाह्र जनामध्ये एक, यहूदा इस्करियोतको मनभित्र सैतान पस्यो। ४ अनि तिनी मुख्य पुजारीहरू र मन्दिरका पालेहरूका नाइकेहरूकहाँ गए र उहाँलाई धोका दिएर तिनीहरूको हातमा सुम्पिने राम्रो उपाय के होला भनेर तिनीहरूसित कुरा गरे। ५ तिनीहरू खुसी भए र तिनलाई चाँदीको पैसा दिन राजी भए। ६ त्यसैले यहूदा तिनीहरूको कुरा मान्न तयार भए अनि वरपर भीड नभएको बेला उहाँलाई धोका दिएर तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिने दाउ खोज्न थाले। ७ अखमिरा रोटीको चाडको दिन आइपुग्यो, जुन दिन निस्तार-चाडको बलि चढाउनै पर्थ्यो। ८ तब उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो: “जाओ र हाम्रो लागि निस्तार-चाडको भोज तयार पार।” ९ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “हामीले कहाँ तयार पारेको तपाईं चाहनुहुन्छ?” १० उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “हेर, जब तिमीहरू सहरभित्र पस्छौ, तब घैंटोमा पानी बोकेको मानिससित तिमीहरूको भेट हुनेछ। उसको पछि-पछि लाग र ऊ जुन घरभित्र जान्छ, त्यसैभित्र पस। ११ अनि तिमीहरूले त्यस घरको धनीलाई यसो भन्नू: ‘गुरुज्यूले सोध्नुभएको छ: “मैले आफ्ना चेलाहरूसित निस्तार-चाडको भोज खाने पाहुना-कोठा कहाँ छ?” ’ १२ तब उसले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजिसजाउ गरेर ठिक्क पारिराखेको ठूलो कोठा देखाउनेछ। तिमीहरूले त्यहीं तयार पार।” १३ त्यसैले तिनीहरू गए र उहाँले जस्तो भन्नुभएको थियो, तिनीहरूले त्यस्तै पाए। अनि तिनीहरूले निस्तार-चाडको भोज तयार पारे। १४ जब बेला भयो, तब उहाँ खान बस्नुभयो र प्रेषितहरू पनि उहाँसितै खान बसे। १५ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले दुःख भोग्नुअघि तिमीहरूसित निस्तार-चाडको यो भोज खाने अति इच्छा गरेको थिएँ। १६ किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरको राज्यमा पूरा नभएसम्म म यो फेरि खानेछैन।” १७ अनि कचौरा लिएर उहाँले धन्यवाद चढाउनुभयो र भन्नुभयो: “तिमीहरूले यो लेओ र पालैसित यसबाट पिओ। १८ किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरको राज्य नआएसम्म अबदेखि म दाखमद्य पिउँदिनँ।” १९ उहाँले एउटा रोटी पनि लिनुभयो र धन्यवाद चढाएपछि भाँचेर यसो भन्दै तिनीहरूलाई दिनुभयो: “यो तिमीहरूका लागि दिइने मेरो शरीरको प्रतीक हो। मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।” २० साँझको खाना खाइसकेपछि उहाँले त्यसैगरि कचौरा पनि लिनुभयो र भन्नुभयो: “यो कचौरा त्यो नयाँ करारको प्रतीक हो, जो तिमीहरूका लागि बगाइने मेरो रगतको आधारमा बाँधिनेछ। २१ “तर हेर, मलाई धोका दिने मसँगै टेबुलमा छ। २२ किनकि मानिसको छोरा भविष्यवाणी गरिएअनुसारै जाँदैछ तर धिक्कार छ त्यस मानिसलाई, जसले उसलाई धोका दिन्छ!” २३ त्यसैले यस्तो काम गर्ने मानिस आफूहरूमध्ये कोचाहिं होला भनेर तिनीहरू आपसमा छलफल गर्न थाले। २४ साथै, तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो कसलाई मान्ने भनेर तिनीहरूबीच चर्को बहस चल्यो। २५ तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “संसारका शासकहरूले आफ्ना जनतामाथि हैकम चलाउँछन्‌ र तिनीहरूमाथि अख्तियार जमाउनेहरूलाई चाहिं परोपकारी भनिन्छ। २६ तर तिमीहरूबीच भने यस्तो हुनु हुँदैन। तिमीहरूमाझ जो सबैभन्दा ठूलो हो, ऊ सबैभन्दा सानोजस्तो बनोस् अनि अगुवाको काम गर्नेचाहिं सेवा गर्नेजस्तो होस्। २७ कोचाहिं ठूलो हो, खान बस्ने कि सेवा गर्ने? खान बस्नेचाहिं होइन र? तर म त तिमीहरूबीच सेवकजस्तै छु। २८ “तर मेरा परीक्षाहरूमा मसितै रहनेहरू तिमीहरू नै हौ। २९ अनि मेरो पिताले मलाई राज्य दिने करार गर्नुभएजस्तै म पनि तिमीहरूलाई राज्य दिने करार गर्छु; ३० तिमीहरू मेरो राज्यमा मेरो टेबुलमा बसेर खानेछौ र पिउनेछौ अनि इस्राएलका बाह्रै कुलको इन्साफ गर्न सिंहासनहरूमा बस्नेछौ। ३१ “सिमोन, ए सिमोन, हेर, सैतानले तिमीहरूलाई गहुँलाई जस्तै निफन्ने माग गरेको छ। ३२ तर तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर मैले तिम्रो लागि उत्कट बिन्ती चढाएको छु र तिमी पश्‍चात्ताप गरेर फर्कनेबित्तिकै आफ्ना भाइहरूलाई बलियो बनाऊ।” ३३ तब तिनले उहाँलाई भने: “प्रभु, म तपाईंसँगै झ्यालखानामा जान अनि मर्नसमेत तयार छु।” ३४ तर उहाँले भन्नुभयो: “पत्रुस, म तिमीलाई भन्छु, तिमीले मलाई चिन्न तीन पटक इन्कार नगरेसम्म आज भाले बास्नेछैन।” ३५ उहाँले तिनीहरूलाई यसो पनि भन्नुभयो: “मैले तिमीहरूलाई पैसाको थैली, खाजाको पोको र चप्पलविना पठाउँदा, के तिमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव भयो?” तिनीहरूले भने: “अहँ, भएन!” ३६ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तर अब थैली हुनेले त्यो बोकोस्, त्यसैगरि खाजाको पोको पनि। अनि तरबार नहुनेले आफ्नो लुगा बेचेर भए पनि एउटा तरबार किनोस्। ३७ किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, लेखिएको यो कुरा ममा पूरा हुनै पर्छ: ‘ऊ कुकर्मीहरूको साथमा गनियो।’ त्यसैले मेरो विषयमा जे भनिएको थियो, त्यो पूरा हुँदैछ।” ३८ तब तिनीहरूले भने: “प्रभु, हेर्नुहोस् त! यहाँ दुई वटा तरबार छन्‌।” उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यति भए पुग्छ।” ३९ बाहिर निस्केपछि उहाँ आफ्नो आदतअनुसार जैतुन डाँडामा जानुभयो अनि चेलाहरू पनि उहाँको पछि-पछि लागे। ४० त्यहाँ पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “परीक्षामा नपर्न प्रार्थना गरिरहो।” ४१ अनि तिनीहरूलाई छोडेर उहाँ दुई-चार पाइला पर जानुभयो। त्यसपछि घुँडा टेकेर यसो भन्दै प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो: ४२ “हे बुबा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो कचौरा* मेरो सामुन्नेबाट हटाइदिनुहोस्। तैपनि मेरो होइन तर तपाईंको इच्छाबमोजिम होस्।” ४३ तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँकहाँ देखा परेर उहाँलाई हौसला दिए। ४४ तर उहाँ असह्य वेदनामा पर्नुभयो र झन्‌ व्यग्रता साथ प्रार्थना गरिरहनुभयो अनि उहाँको पसिना रगतको थोपासरी भुइँमा खसिरहेको थियो। ४५ प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँ उठेर चेलाहरूकहाँ जानुभयो र तिनीहरू सुर्ताले क्लान्त भई निदाइरहेको भेट्टाउनुभयो। ४६ अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू किन निदाइरहेका छौ? जाग र परीक्षामा नपर्न प्रार्थना गरिरहो।” ४७ उहाँ बोल्दाबोल्दै, हेर, एउटा भीड आयो। अनि बाह्र जनामध्ये एक, यहूदा तिनीहरूको अघि-अघि थिए। येशूलाई चुम्बन गर्न तिनी उहाँको छेउमा गए। ४८ तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “यहूदा, के तिमी चुम्बनले मानिसको छोरालाई धोका दिन्छौ?” ४९ के हुँदैछ भन्ने देखेर उहाँको वरपर हुनेहरूले यसो भने: “प्रभु, के हामी तरबारले हानौं?” ५० तिनीहरूमध्ये एक जनाले प्रधान पुजारीको दासलाई प्रहार गरेर उसको दाहिने कान च्वाट्टै काटिदियो। ५१ तर येशूले भन्नुभयो: “बस्, अब अरू केही नगर।” त्यसपछि उसको कान छोएर उहाँले निको पारिदिनुभयो। ५२ तब उहाँलाई पक्रन आएका मुख्य पुजारीहरू, मन्दिरको पालेहरूका नाइकेहरू र धर्म-गुरुहरूलाई येशूले भन्नुभयो: “के तिमीहरू डाँकुलाई पक्रन आएजस्तै गरी तरबार र लाठोहरू लिएर आयौ? ५३ म दिनदिनै मन्दिरमा तिमीहरूसितै हुन्थें, तैपनि त्यतिबेला तिमीहरूले मलाई पक्रेनौ। तर यो तिमीहरूको बेला हो र अन्धकारले शासन चलाउने समय हो।” ५४ त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई गिरफ्तार गरेर लगे अनि प्रधान पुजारीको घरमा पुऱ्याए तर पत्रुस भने टाढै रहेर उहाँको पछि-पछि लागिरहेका थिए। ५५ मानिसहरूले चोकको बीचमा आगो बालेर तापिरहेको बेला पत्रुस पनि तिनीहरूसितै बसिरहेका थिए। ५६ तिनलाई दन्केको आगोको छेउमा बसिरहेको देखेपछि एउटी नोकर्नीले तिनलाई राम्ररी हेरिन्‌ र यसो भनिन्‌: “यो मानिस पनि उहाँसँगै थियो।” ५७ तर तिनले नकार्दै यसो भने: “ए नारी, म उहाँलाई चिन्दिनँ।” ५८ यसको केही समयपछि अर्को एक जनाले तिनलाई देख्यो र यसो भन्यो: “तिमी पनि तिनीहरूमध्येकै हौ।” तर पत्रुसले भने: “म होइन।” ५९ अनि लगभग एक घण्टा बितेपछि अर्को एक जना मानिसले यस्तो ठोकुवा गर्न लाग्यो: “यो मानिस पनि पक्कै उहाँसित थियो, किनकि यो गालीली नै हो।” ६० तर पत्रुसले भने: “ए मानिस, तिमी के भन्दैछौ, म जान्दिनँ।” अनि तिनी बोल्दाबोल्दै त्यतिखेरै भाले बास्यो। ६१ तब प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो अनि प्रभुले भन्नुभएको यो कुरा पत्रुसले सम्झे: “आज भाले बास्नुअघि तिमीले मलाई तीन पटक तिरस्कार गर्नेछौ।” ६२ अनि तिनी बाहिर निस्केर धुरुधुरु रोए। ६३ उहाँलाई पहरा दिइरहेका मानिसहरूले उहाँको गिल्ला गर्न र उहाँलाई हिर्काउन थाले। ६४ उहाँको अनुहार छोपिदिएर तिनीहरू यसो भन्न लागे: “लौ भविष्यवाणी गर्, तँलाई हिर्काउने को हो?” ६५ अनि तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा अरू थुप्रै कुरा भनेर निन्दा गर्न लागे। ६६ उज्यालो हुनेबित्तिकै धर्म-गुरुहरूको सभा बस्यो, जसमा मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू पनि सामेल थिए। अनि तिनीहरूले उहाँलाई यहूदी न्यायपरिषद्को भवनमा लगे र यसो भने: ६७ “तँ ख्रीष्ट होस् भने हामीलाई भन्‌।” तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले तपाईंहरूलाई बताएँ भने पनि तपाईंहरूले पटक्कै पत्याउनुहुनेछैन। ६८ अनि मैले तपाईंहरूलाई प्रश्न सोधें भने त्यसको पटक्कै जवाफ दिनुहुनेछैन। ६९ तर अबउसो मानिसको छोरा परमेश्वरको शक्तिशाली दाहिने हाततर्फ बसिरहेको हुनेछ।” ७० यो सुनेर तिनीहरू सबैले सोधे: “त्यसोभए, के तँ परमेश्वरको छोरा होस्?” उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “म हुँ भनेर तपाईंहरू आफै भन्दै हुनुहुन्छ।” ७१ तिनीहरूले भने: “हामीलाई अरू साक्षी किन चाहियो र? यसको आफ्नै मुखबाट हामीले सुनिहाल्यौं।”
^ लूका २२:४२ * मत्ती २६:३९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।